Qarax seddexaad oo ka dhacay Muqdisho iyo Faahfaahin ku saabsan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qarax seddexaad oo ka dhacay Muqdisho iyo Faahfaahin ku saabsan
Beegsonews – Wararka naga soo gaarayo Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ayaa sheegayo inuu halkaas ka dhacay Qarax Seddexaad.
Qaraxaan ayaa ka dhacay agagaarka Masaajidka Biyamaalow oo ku yaal inta u dhaxeyso Isgoysyada Bakaaraha iyo Howl-Wadaag.
Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel Qashin ah, waxaana la sheegay inuu ahaa mid meesha lagu duugay.
Sida ay goobjoogayaal u sheegeyn Caasimadda Online qaraxaan ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 5 qof halka tiro intaas la eg ay ku dhaawacmeyn.
Dadka dhibaatada kasoo gaartay Qaraxaan ayaa la sheegay inay ahaayeen dad shacab ah oo halkaas ku sugayey Gawaraada Rayidka ee loo yaqaan BL, waxayna isugu jireen arday iyo dad kasoo dukaameystay Suuqa Bakaaraha.
Qaraxaan ayaa noqonayo midkii Seddexaad oo ka dhaca Maanta Magaalada Muqdisho.
Qaraxyadii ugu horreeyey ayaa lagu weeraray Wasaaradda Shaqadda iyo Arrimaha Bulshadda dowladda Soomaaliya oo ku taalla meel u dhow Isgoyska Jubba ee Muqdisho.
Next articleQaraxii Afaraad iyo Shanaad oo ka dhacay Muqdisho Xildhibaano iyo Askar lagu dilay